“မြင့်မြတ်သောဘုံဘဝမှာ အနုပညာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းပါစေ လို့ ရေမွန်အတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့ ထားထက်ထက်” – Youth Bar
“မြင့်မြတ်သောဘုံဘဝမှာ အနုပညာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းပါစေ လို့ ရေမွန်အတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့ ထားထက်ထက်”
ဒီကနေ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ရေမွန်အတွက် ထားထက်ထက်က သူ့ရဲ့လူမူကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်စ်မှာ အခုလိုရေးသားထားပါတယ်။
“တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ရဲဘက် အကို ရေမွန် သို့
အကို့အမေဆီမှာ သီချင်းဆိုသင်တန်းတက်ရင်း အကို့ကိုသိခဲ့ပါတယ်။ အကို့သီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အကို့ အနုပညာ ကို ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း We Love Yangon မှာ ပရဟိတ လုပ်ရင်းထပ်ဆုံကြတဲ့ အခါ အရင်လိုပဲ ဖော်ရွေဖြူစင်တဲ့ အပြုံးနဲ့အကို့ကောင်မလေး ကေကေနဲ့အတူတူ အကို့အနုပညာနဲ့ ပရဟိတလုပ်နေသူတွေကို အားပေးရင်း သီချင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေပေးတဲ့ အကို….
တော်လှန်ရေးအတွက် အကိုလွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်နေတာသိခဲ့ရပြန်တော့လဲ လေးစားရပါတယ်။ အခုလို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကိုလဲ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် အကို…..
အစားအသောက် ၊ အနေအထိုင်ဆင်းရဲပြီး ငှက်ဖျားပိုးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်တာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် အသက်ဆုံးရှုံးရလို့ ဝမ်းနည်းရပါတယ်..…
ပိုပြီးဝမ်းနည်းရတာက တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြင်ဆင်နေတဲ့ ရဲဘော်တစ်ယောက်ဟာ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ဒီအထိရောက်လာ ၊ တိုက်ခိုက်ရေး ပညာတွေသင်ပြီးမှ အဆင်သင့်မဖြစ်ခင် ၊ မတရားမှုအတွက် စကစသူပုန်တွေကိုပြန်ပြီး မတိုက်ရခင်မှာ ဆုံးရှုံးသွားရတာကို ပိုနှမြောတသဖြစ်ရတယ်…..
ကိုရေမွန်လဲ ဒီအတိုင်းပဲ စိတ်ထဲရှိနေမယ်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်….
ကျဆုံးခဲ့ပြီးသော ရဲဘော်ကို ကျွန်မ ကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အခုထက်ပိုပြီး ကြိုးစားပါမယ်။ အခုထက် ပိုပြီး အားစိုက်ပါမယ်။ အခုထက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသက်တွေမဆုံးရှုံးရအောင် ၊ ရဲဘော်တွေအားလုံး တိုက်ပွဲ အတွက်ချပ်ဝတ်တန်ဆာ အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် ၊ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အခန်းကဏ္ဌကနေပါဝင်ပါ့မယ်။
မြင့်မြတ်သောဘုံဘဝမှာ အနုပညာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းပါစေ”
ထားထက်ထက် 23 June 2021
Source-Htar Htet Htet fb acc
မြင့်မြတ်သောဘုံဘဝမှာ အနုပညာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းပါစေ ”
သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကြည်နူးစရာအမှတ်တရ ၀မ်းနည်းစွာပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော်ရေမွန်ရဲ့ကောင်မလေး
အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်း အိမ်မပြန်ဘူးလို့ ပိုင်ဖြိုးသုပြော